Ụgbọ elu mbụ nke F-16 Advanced Aggressor Fighter ugbu a emechala
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ụgbọ elu mbụ nke F-16 Advanced Aggressor Fighter ugbu a emechala
Top Aces Corp. taa kwuputara ụgbọ elu nnwale mbụ na-aga nke ọma nke F-16 Advanced Aggressor Fighter (F-16 AAF) nke nwere Advanced Aggressor Mission System (AAMS). Nkà na ụzụ ọkaibe a na-enyere ụgbọ elu Top Aces aka imepụtaghachi ike kachasị elu nke ndị mmegide ikuku na ikuku nke ugbu a. Na mmecha nke mbụ ule ụgbọ elu, F-16 AAF ga-eme ugbu a a usoro nke siri ike arụmọrụ ọrụ na nkwadebe maka ịbanye ya na United States Air Force.
Kwadoro site na ihe owuwu sistemu mepere emepe, AAMS na-enye ohere ntinye ngwa ngwa nke sensọ na ọrụ nke onye ahịa chọrọ iji kwalite njikere ikuku ha. Dịka ọmụmaatụ, taa, a na-etinye usoro ahụ na:
• Igwe eletrọnịkị na-enyocha ngwa ngwa (AESA) radar ikuku na ikuku;
• Sistemụ Ntụkwasị Okpu agha (HMCS);
• Usoro datalink nkwukọrịta n'etiti ụgbọ elu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ;
• Sistemụ Nchọ na Track (IRST) infrared;
• Ngwá agha ntụkwasị obi dị elu na-enye ohere ịmegharị usoro mmegide ziri ezi;
• Mwakpo eletrọnịkị dị elu na-arụ ọrụ na ike nchọpụta RF na-agafe agafe; na
• Ọtụtụ ọrụ akọ na-ahazi usoro ndị a dị n'elu iji nye ụdịdị dị iche iche nke mmetụta mmegide.
AAMS na-anọchite anya afọ anọ nke nyocha na ọrụ mmepe site na ndị injinia Top Aces na teknụzụ Coherent Technical Services, Inc. (CTSi) nke Lexington Park, MD. N'afọ gara aga, AAMS nwetara asambodo maka iji na Top Aces 'flet nke A-4N Skyhawks ma na-arụ ọrụ ugbu a na German Armed Forces na ndị ahịa Europe ndị ọzọ maka ọzụzụ ụgbọ elu dị elu. Ugbu a, otu a otu federated ozi usoro arụnyere na Top Aces 'F-16A ụgbọ elu M7 Aerospace nke San Antonio, TX, ihe Elbit Systems nke America ụlọ ọrụ nwere ahụmahụ na ụgbọ elu Mmezi, Mmezi na Overhaul (MRO).
Top Aces na-ezube ịkwalite ọtụtụ ụgbọ mmiri F-16 ya na teknụzụ AAMS na-emebi ala n'ime afọ na-abịa.
"Mgbe ị na-ejikọta ike na avionics nke F-16 na AAMS, ọ na-enye usoro ọzụzụ ọzụzụ kachasị mma na nke bara uru maka ndị na-anya ụgbọelu na-efe efe ọgbọ nke ise, dị ka F-22 ma ọ bụ F-35", na-ekwu. Russ Quinn, Onye isi ala, Top Aces Corp., onye agha USF dị afọ 26 na onye ọkwọ ụgbọ elu mbụ Aggressor nwere ihe karịrị awa ụgbọ elu 3,300 F-16.
"N'ihi ụdị nkwụnye na-egwu nke AAMS anyị, ọ na-enye ohere maka mgbakwunye ọhụrụ na ihe mmetụta na-apụta nke ọma n'ọdịnihu, nke na-enye mgbanwe iji kwalite F-16 anyị ma gboo mkpa nke Air Force ruo ọtụtụ afọ. ịbịa,” ka Maazị Quinn na-agbakwụnye.
Ọgwụgwọ Ọhụrụ maka Migraine
Central African Republic na-eme Bitcoin iwu ọhụrụ ya…
Ahịa ntụ ọka agwa 2022 tụrụ anya na uto...
Boeing enyela nde $2 iji kwado ọrụ enyemaka mmadụ…
Mgbasa ozi ọhụrụ maka nyocha ọrịa kansa akpa ume na-azọpụta ndụ
Mmepụta ka ukwuu nke Oral COVID-19 Antiviral…
Ọdụ ụgbọ elu Heathrow London otu ụbọchị n'otu oge
Ndị gụsịrị akwụkwọ na JCTI ga-agbanwe ọrụ njem nlegharị anya...
A na-achọpụta ọrịa cancer ozugbo
Jamaica na Cuba na-aga n'ihu na mkparịta ụka iji mee ka njem nlegharị anya dị ike ...
Johnny Depp - Amber Heard ikpe nkwutọ na…
Ọdụ ụgbọ elu Toronto ka ukwuu: Ọrụ ndị njem na-abawanye...
Outlook Market Implant ahaziri Orthopedic...
Ọbịa pụrụiche Aurora Expeditions na njem ụgbọ mmiri UK
Ahịa ndị na-ahụ maka ịgba mmiri na-abụghị nke ugbo...
Global Parallel Robotic Gripper Market Analysis nke...